Ukuphupha iinkukhu Discover Discover Discover online ▷ ➡️
Into yokuqala abantu abaninzi abayicingayo xa besiva igama elithi "iinkukhu" ngumhlambi weenkuku, amadada, amarhanisi, okanye ipheasant yokuqhwitha nokuthwala. Uninzi lwazo aluyi kungathathi cala kwezi zilwanyana okanye ziya kuzijonga ngolangazelelo ngenxa yamaqanda amnandi. Kwabanye abantu, nangona kunjalo, umhlambi weenkukhu onjalo uxhokonxa uloyiko okanye kufutshane noloyiko, njengoko babona kwangoko imilomo etsolo kunye neenyawo ezinjenge-claw. Iintaka eziqhwethayo nazo kunzima ukuzilawula kwaye zisongela ukubanjwa ezinweleni.
Lingathetha ntoni iphupha malunga neenkukhu, bona inqaku elilandelayo:
1 Uphawu lwephupha «iinkukhu» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «iinkukhu» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «iinkukhu» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «iinkukhu» - ukutolikwa ngokubanzi
Kutoliko jikelele lwamaphupha, uphawu lwephupha "intaka" ngokuyintloko luphawu lwe Ukungangqinelani kwaye ilawulwa kukuqhuba Ukubeka. Ngapha koko, umntu ophuphayo uboniswa ukuba uxakeke kakhulu el mundo ukuvuka ngezinto zemihla ngemihla kunye nezinto ezingenamsebenzi. Ngelixa ezi zinto zibalulekile kuye, ngokuyintloko ziphazamiso kwizinto ezibalulekileyo zobomi. Ukulala kuboniswa luphawu lwephupha ongena kulo kwaye kuya kufuneka ujolise kwezona zinto zibalulekileyo ebomini bakho.
Ngokunxulumene nesimboli yamaphupha "iinkukhu", kukho iimeko zamaphupha ezahlukeneyo ezinokutolikwa ngokwahlukileyo. Ukubona kweenkukhu eziphilileyo ephupheni kunokutolikwa ngokubanzi kokulala kwisifo sehlabathi esivukayo okanye Iingxakiethi, nangona kunjalo, ihlale ixesha elifutshane. Kodwa kwakhona isithukuthezi kunye ne-monotony banokulinda ukulala kwihlabathi elivukayo. Ukuba umfazi uphupha iinkukhu, uphawu lwephupha lubonisa ixesha elifutshane lokugula okanye ukuxabana nabahlobo abasondeleyo.
Ukuba ibhinqa eliselula liyambona eleqa iinkukhu eziphilayo ephupheni, ukutolikwa ngokubanzi kwephupha kuthetha kuye ukuba uya kuchitha ixesha lakhe elixabisekileyo kwizinto ezithandekayo ezithandekayo kwihlabathi eliphaphamileyo.
Ukubona kweenkukhu ezibilisiweyo ephupheni kuthathwa njengokuzibaxa. Iminqweno itolikwe ngokuphupha. Nangona kunjalo, oku kuyakubeka uxinzelelo olukhulu koovimba bemali. Umphuphi kufuneka azibuze ukuba ngaba ezi ndleko ziyimfuneko ngokwenene.
Iinkuku ezibambe phezulu ephupheni zinje nge isilumkiso ukuqonda ukuphupha ngaphambi komona kunye nenzondo yabanye abantu.
Ukondla iinkukhu ephupheni kufanekisela iphupha lokuba kungekudala uza kuba nobutyebi okanye imali. Inzuzo ungabala. Ukuba iinkukhu eziphuphayo zixhelwa ephupheni, uphawu lwephupha lubonisa ukuba ufuna ukuzikhusela kumarhe amabi malunga nawe. Ukongeza, le meko yamaphupha iyamcacisela ukuba kufuneka ahlale kude okanye azihlukanise nabantu abamcaphukisayo okanye abanomdla kakhulu kuye.
Uphawu lwephupha «iinkukhu» - ukutolikwa kwengqondo
Ukutolikwa kwengqondo kwephupha kutolika uphawu lwephupha "intaka" njengophawu lwe i-malaise yangaphakathi y Ukuxinezeleka yokuphupha. Ezi mvakalelo zinokuyongamela inkqubo yokulala luvo ekuhambeni kwexesha. Kuya kufuneka ukuba uzibuze ukuba zeziphi izizathu zolu xinzelelo. Rhoqo emva kwezi yimvakalelo zoloyiko, iingxoxo ezingasonjululwanga, ixhala, okanye uxinzelelo olugqithisileyo.
Uphawu lwephupha «iinkukhu» - ukutolika kokomoya
Ngokwasemoyeni uphawu lwephupha «intaka» lunokuba ngamaphupha uloyiko lwangaphakathi ukutyhila.